इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्सलाई १००ः३३ को अनुपातमा प्राप्ति गर्ने Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई १००ः३३ को अनुपातमा एक्वायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संचालक समितिको जेठ १२ गते बसेको बैठकले जेबिल्स फाइनान्सको १०० कित्ता भएका सेयरधनीलाई बैंकको ३३ कित्ता सेयर दिने गरी प्राप्तिको निर्णय गरेको हो ।
बैंकको संचालक समितिले संयुक्त मर्जर समितिले तयर गरेको शेयर आदानप्रदान अनुपातको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको हो ।
अहिले इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चुक्तापूँजी १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तथा जेविल्स फाइनान्सको ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जेविल्स फाइनान्सलाई गाभेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्तापूँजी करिब साढे २७ करोडले बढ्नेछ ।
पूँजीवृद्धि अनुसार शाखा विस्तार गर्न नसकेको जेविल्सले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गाभिने निर्णय गरेको थियो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग बिलयको सम्झौतासँगै दोस्रो बजारमा जेविल्स फाइनान्सको कारोबार रोक्का रहेको छ।
कारोबार रोक्का हुनुअघिसम्म जेबिल्सको दोश्रो बजारमा अन्तिम बिक्री मूल्य प्रतिकित्ता १४६ रुपैयाँ रहेको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हाल दोश्रो बजारमा अन्तिम बिक्री मूल्य प्रतिकित्ता ५३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सिरहाका बाढीपीडितलाई सहयोग
आगामी सातादेखि लगानीकर्तालाई ब्रोकरबाटै मार्जिन ऋणको व्यवस्था!
समता माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य दुई दिनमै रु. १०३ ले बढ्यो
दशैंको नयाँ नोट साट्न उपत्यकाबासीले राष्ट्रबैंक धाउनु
काठमाण्डौ । दशैंका लागि आवश्यक नयाँ र सुकिला नोट साट्न काठमाण्डौ...
पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्–‘बैंकका संचालकलाई उमेर हद तोकेर
काठमाण्डौ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बैंक तथा वित्तीय...
मुक्तिनाथ बैंकद्वारा आश्रित जेष्ठ नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमीटेडले सस्ंथागत सामाजिक...
दसैँका लागि राष्ट्रबैंकले यसै साता बैंकहरुलाई नयाँ नोट
काठमाण्डौ । नेपालीको महान पर्व दसैँ आउन अब ११ दिनमात्र बाँकी छ ।...
एनआईसी एशिया बैंककोे पीओएस सेवा आजबाट सुचारु
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकको प्वइन्ट अफ सेल्स् (पीओएस) सेवा...
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकले असोज महिनाभर १९ प्रकारका
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमीटेडले आफ्नो १९ औ वार्षिकोत्सवको...
विद्यालयलाई सेञ्चुरी बैंकको सहयोग
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक...
‘फोर्स मर्जर’को विपक्षमा अर्थमन्त्री, बैंकरहरुमा थपियो
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा निजी क्षेत्रको...